Akụkọ - Gịnị bụ akpa na nkwakọ igbe?
A akpa-na-igbe bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa nke na-ejikọta igbe, akpa na tube ọnụ, na-eme ka ịbufe na nkesa ngwaahịa mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma ma na-ezere enweghị mmetọ.
Obere akpa: Obere akpa ahụ nwere otutu ihe mkpuchi ihe nkiri ekpokọtara ọnụ, emebere ya iji chebe ịdịmma ngwaahịa yana chekwaa ngwaahịa ahụ site na ndochi ruo iji njedebe.
Isi ihe: Isi ihe niile nke akpa akpa anyị, a na-emechi ihe mkpuchi plastik a na-emeghe na akpa ahụ n'oge mmepụta ma bụrụ ebe ntinye maka imeju ngwaahịa ahụ n'ime akpa ahụ. Mgbe emejuchara, ntọala ahụ nwere okpu dị mfe, ụdị mgbanaka ma ọ bụ njikọ, dabere na ngwa njedebe nke ngwaahịa ahụ.
Nozzle: Nozzles na-ezo aka n'ụzọ sara mbara na klas nke akụrụngwa dabara na ntọala. N'ihe banyere akpa-in-Box BIB ubi, ọ nwere ike ịbụ okpu dị mfe, valvụ dị mgbagwoju anya na ihe nkwụnye ma ọ bụ eriri maka ijikọ akụrụngwa na-ekesa.
Igbe: Igbe bụ nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí nke na-ejide akpa jupụtara na mkpuchi. Ọ nwere ike ịbụ igbe kaadiboodu dị mfe ma ọ bụ drum ígwè nke nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Akụkọ ihe mere eme nke akpa-na-igbe usoro:
N'ịbụ onye William R. Scholle sụrụ ụzọ ma nweta ikike ya na 1955, a na-ebubu akpa-in-igbe ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla iji bufee acid batrị n'ọdụ ụgbọ ala na-ebu mmanụ na ụlọ ahịa ndozi. Ọ bụ ezie na ụdị nkwakọ ngwaahịa a naanị na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-amalite, mana n'oge na-adịghị anya mepụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ. 1956, usoro ndochi aseptic ka emechara nke ọma, nkeakpa-na-igbe enwere ike ịgbatị na mmepụta nri na ihe ọṅụṅụ.
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd. nwere ahụmahụ afọ 12 na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nchekwa gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ anyị na-etinye aka na ịdị mma ngwaahịa ma na-achịkwa njikọ ọ bụla site na mmalite, yana àgwà mepere emepe na ezi obi, anyị na-anabata ndị enyi si n'akụkụ niile nke ndụ na ụlọ ọrụ anyị maka nkwurịta okwu. na nyocha.
Oge nzipu: Sep-02-2021